Tetikasa Hay Tao-Usaid: fiarovana ny ala honko - ewa.mg
News - Tetikasa Hay Tao-Usaid: fiarovana ny ala honko
Hita eto Madagasikara ny 2%-n’ny ala honko maneran-tany. Ahitana zavamaniry sy biby na hazandrano tsy fahita raha tsy eto amintsika. Toeram-ponenan’ny tantely sy ny landy dia ny zavamaniry, ary torak’izany koa ny hazandrano sady hanatodizany, toy ny drakaka, ny makamba, ny trondro, sns.
Tsy manana paikady mazava sy maharitra hitantanana ny ala honko anefa i Madagasikara. Izay no nahatonga ny atrikasa nasionaly atao any Toliara, ny 23 hatramin’ny, anio, 25 jolay.
Mirongatra ny fandripahana
Tanjona ny hitantanana maharitra ho lovain-jafy ny ala honko, ao anatin’ny Fandaharanasa iarahana amin’ny Amerikanina, Usaid Hay Tao, sy ny fanjakana malagasy. Nahatratra 200 ny mpandray anjara avy amin’ny faritra samihafa eto Madagasikara.
Maro ny vokatsoa azo amin’ny ala honko eo amin’ny lafiny tontolo iainana, ny sosialy, ny fizahantany ary indrindra ny toekarena ankapobeny. Eo koa ireo mpanararaotra, mitrandraka tsy ara-dalàna sy mihoapampana, ka manafaingana ny fahapotehan’ity harena voajanahary ity, sady mampirongatra ny fihenan’ny ala eto Madagasikara.
Fambolen- kazo 10 ha
Dinihina mandritra ity atrikasa any Toliara ity ny hamoahana tondrozotra mazava hitantanana ny ala honko ary tonga dia hampiharina. Aorian’izay, hisy avy hatrany ny fambolena hazo honko amin’ny velaran-tany 10 ha, hatao any Ambondrolava, rahampitso 26 jolay, mifanandrify amin’ny Andro iraisam-pirenena fiarovana ny ala honko. Lohahevitra noraisina ny hoe “Hay tondra sy hay tanana hampaharitra ny ala honkontsika”. Maherin’ny 1.000 ny hanatanteraka izany fambolen-kazo izany.
L’article Tetikasa Hay Tao-Usaid: fiarovana ny ala honko a été récupéré chez Newsmada.
Fitantanana ny mahaolona
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy tany Mahajanga I, omaly, ny vaomieram-pirenena misahana ny famindran-toerana ao amin’ ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Nohamafisin’ny tale misahana ny mahaolona ao amin’ny minisitera ny fitondrana fanatsarana amin’ny alalan’io vaomiera io ny fomba famindrantoerana ny mpiasa. L’article Fitantanana ny mahaolona est apparu en premier sur AoRaha.
Mpiray tsikombakomba amin’i Del Kely: voasambotra ny ben’ny Tanànan’i Bekapaika
Miisa efatra ankehitriny ireo jiolahy mpiray tsikombakomba amin’i Del Kely voasambotry ny zandary avy ao Tsaratanàna, andro vitsy taorian’ny nahatrarana io jiolahy raindahiny io. Voatonona ao anatin’izany ny anaran’ny ben’ny Tanànan’i Bekapaika. Ao koa ny lehilahy iray atao hoe Sedera, sy ny olona roa hafa mpanome vaovao an’i Del Kely, antsoina hoe Abel, sy ny vehivavy iray atao hoe Olda. Taorian’ny nahatrarana an’ireo olon-dratsy ireo, natao fanadihadiana ao amin’ny tobin’ny zandarimaria ao Tsaratanàna ireo voasambotra ary atolotra ny fampanoavana aorian’izay.Araka ny fanadihadiana, nisolosolo kara-panondro i Del Kely nandritra ny asa ratsiny, nanao hosoka sy fampiasana hosoka ihany koa izy. « Araka izany, Rakotondravoavy Odelson Parfait ny tena anarany », hoy ny fanazavan’ny loharanom-baovao iray ao an-toerana. « Mbola hita ao Tsaratanàna avokoa, hoy izy, ny mombamomba io jiolahy io toy ny sekoly nianarany, ny karne nampiasainy tamin’izany.Henintsoa HaniL’article Mpiray tsikombakomba amin’i Del Kely: voasambotra ny ben’ny Tanànan’i Bekapaika a été récupéré chez Newsmada.
Misy misoloky ny tanin’ny fianakavian’i Lova Renée
Velon-taraina ireo ray aman-drenin’i Lova Renée, ilay zazavavikely nanao fanentanana ho fiarovana ny Coronavirus. Mitaraina ireo fianakaviany fa misy mangalatra ny tany misy azy ireo ao Mangarano II, parisela 1/47 ao Toamasina. Fantatra fa nisy namaritra ny tany misy ireo tompon-tany. Vao tsikaritr’ireo tompon-tany anefa izany, nandositra ireo « mpanao bornage ». Taorian’izay, nanatona ireo tompon’andraikitry ny tany ny fianakavian’i Lova Renée nikarakara ireo taratasy samihafa (…) « Manao hosoka sy fampiasana hosoka (faux et usage de faux) ireo milaza fa tena tompon-tany, ireo fahavalonay », hoy ny filazan-dRandriankoto René. Milaza ireo olona fa nataony tamin’ny taona 2000 ny fifampivarotana ary tamin’ny taona 2011 tao Arivonimamo ny « légalisation » an’izany. « Ny anay kosa, vita ny taona 2004 ny “acte de vente” ary “légalisé” ny taona io ihany izany », hoy hatrany ralehilahy. Vokany, voatery izahay nanamarina ilay filazana tao amin’ny kaominina Arivonimamo ireo fianakaviana. Nandiso izany anefa ireo tompon’andraikitra ao an-toerana, nilaza ihany koa fa « dépôt de signature » no misy. Taorian’ireo dingana samihafa natao teo anivon’ny fitsarana, nandresy ny fianakavian-dRandriankoto René. Fandresena tsy naharitra akory fa nanohitra ireo mpiady ny taniny. Taorian’izay, nametraka fitoriana eny anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana ireo fianakaviana ny taona 2015. Nohamafisiny indray izany ny taona 2019, saingy mbola tsy nahitam-bokany. Nambarany fa miovaova hatrany ny anaran’ny tanin’ireo fianakaviana ao anatin’ireo antontan-taratasy eny amin’ny tribonaly. Isan’izany ny Villa Soanandrasana, ny anarana atao hoe Manantenasoa ary ny Soanantenaina. Henintsoa HaniL’article Misy misoloky ny tanin’ny fianakavian’i Lova Renée a été récupéré chez Newsmada.
Tsy fandriampahalemana ifotony izao…
Tanàna tsy ilaozan’adala? Na aiza na aiza, misy hatrany ny hoe olon-dratsy, ny asan-jiolahy… Na izany aza, rehefa mby amin’ny tsy azo leferina na tsy zaka: mitaraina ihany… Toy izay ataon’ny mponina ifotony amina faritra vitsivitsy. Tsy lavina, efa nihena, ohatra, ny fakana ankeriny tato ho ato. Saingy, tsy mbola mahafa-bela ny fanafihan-jiolahy mitam-piadiana: manao herisetra, mandatsaka aina… Tena misy ny faritra na ny tany lavitra fanjakana, anjakazakan’ny olon-dratsy sahy manao izay saim-pantany: fanjakana kely ao anaty fanjakana, tsimati­manota? Eo koa, ohatra, izay efa natsidika teto matetika: ny fanimbana tontolo iainana antsikirano izao amina karazana fitrandrahana tsy ara-dalàna. Tsy hitan’ny mponina ifotony izay itarainana, na izay mba mijery sy mihaino azy amin’izany. Toy izany koa ny ady tany efa ho lava; indraindray, efa zary tsy itokisan’ny vahoaka ifotony ny fitsarana… tsy ahazoany rariny sy rirany. Kolikoly? Na tsikombakomba, na mahitahita fa hoe mahalala olona ambony na akaiky mpitondra… Ny itanisana ny ratsy, hiavian’ny soa? Tsy fandriampahalemana sosialy na tsy filaminana ifotony avokoa izany, amisavisana ny vokany sy izay tokony hatao. Anisan’ny tsy mahamarin-toerana ny famokarana izay tsy fandriampahalemana amin’ny tany lavitra fanjakana izay. Mahalala sy mijery ny zava-misy eny ifotony ve ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry eny an-toerana? Na misy ny sasany amin’izy ireny manao ambany maso tsy hita izay manjo ny vahoaka, na mety mamela ny olon-dratsy hanao ny ataony mba tsy hilazana hoe miray tsikombakomba… Misy ve ny tatitra voarain’ny fanjakana foibe? Na ny fihainoana ny fitarainana avy any ifotony, ny fandraisana avy hatrany andraikitra fa tsy iandrasana mby amin’izay tsy takona afenina, manala baraka… Amin’izany, efa ahina hivadika zavatra hafa ny raharaha? Aleo tsy visavisaina sy tanisaina fa zary fanafenana ny tsy fahombiazana sisa eo amin’izay sehatra sendra izay: aza hita, aza mahita?Rafaly Nd.L’article Tsy fandriampahalemana ifotony izao… a été récupéré chez Newsmada.
Fibatana Fonjamby : mifanampy amin’ny kotrana ry Andriantsitohaina mirahalahy
Isan’ireo atleta malagasy tsy manao ambanin-javatra ny kotrana ireo mpibata fonjamby mirahalahy, Andriantsitohaina Tojo sy Andriantsitohaina Eric. Hita taratra amin’ny vokatra tsara azon’izy ireo rehefa misy fifaninanana iraisam-pirenena izany fahazotoana manao fanazaran-tena izany. Amin’izao fihibohana izao, mitohy ny kotrana ary mifanampy izy mirahalahy. Nambaran’i Eric fa sarotra ny nikotrana tamin’ny fiandohan’ny fihibohana noho ny tsy fisian’ny fitaovana. Nanaiky nanome ireo fitaovana ilaina anefa ny federasiona taty aoriana ka nanamora ny fanaovana fanazaran-tena. Na dia tsy mitovy tanteraka ny any amin’ny toeram-pikotranana aza ny fanazanran-tena ao an-trano, manamora izany ny fifanampiana eo amin’izy miraha­lahy, raha ny hita amin’ny horonantsary zarainy ao amin’ny pejy fesiboky isan’andro. Kara­zana kotrana maro ny ataon’izy ireo, toy ny “crossfit”, ny “squat”, ny “musculation” sy ny maro hafa. Tsiahivina, isan’ny nitondra avo ny voninahi-pirenena ha­trany, teo amin’ ny taranja fibatana fonjamby i Tojo sy i Éric. Tsy maintsy mitondra medaly mody eto an-tanindrazana izy mirahalahy isaky ny fifanina­nana iraisam-pirenena hatre­hany. Efa mivonona sahady ihany izy ireo amin’ny fifaninanana goavana mbola ho avy, indrindra ny Lalao olympika, amin’ ny taona hoavy izay hatao any Tokyo Japana.Mi.RazL’article Fibatana Fonjamby : mifanampy amin’ny kotrana ry Andriantsitohaina mirahalahy a été récupéré chez Newsmada.
-Rencontre au sommet au sein de la Direction Générale du Trésor de Madagascar. Les trésoriers généraux, principaux, et ministériels, ainsi que les agents comptables centraux se sont réunis, vendredi dernier, avec le DG du Trésor Ihaja Ranjalahy. Marquée sous le signe de la décentralisation, la rencontre était, notamment, l’occasion pour ces responsables d’échanger sur les dispositions à prendre pour améliorer les services publics assurés par le Trésor dans les différentes régions du pays. La réunion était également axée sur l’examen du Circulaire d’Exécution Budgétaire établi notamment avec la Direction générale des autorités de régulation des marchés publics, la Direction générale du contrôle financier et la Direction du budget. -Le ministère de l’Economie et des Finances renforce la lutte contre la pandémie de Covid-19. En marge de la cérémonie de levée des couleurs hier, des dispositifs de tests du coronavirus sont mis en place suite à la demande du ministre de l’Economie et des Finances Richard Randriamandranto. Cette campagne de dépistage vient en appui aux efforts déployés jusqu’ici afin de limiter la propagation de ce virus au sein du MEF. Les agents jugés vulnérables ainsi que ceux qui ont eu des cas contacts ont été priorisés pour le dépistage. Comme l’exemple vient d’en haut, le ministre lui-même s’est fait dépister. En parallèle à cette initiative, la Direction générale des impôts (DGI) a également déployé des moyens pour lutter contre la pandémie dans ses locaux. Outre les barrières sanitaires qui sont toujours appliquées, ses bureaux à travers Madagascar ont été munis d’alcool, de thermomètres, de virucide, de pulvérisateur, de gel hydroalcoolique. Des boîtes de « CVO plus » ont été distribuées à ses agents. -Le Tchad obtient un accord de principe du FMI pour une facilité d’un montant de 560 millions de dollars. Ce financement vise à soutenir la reprise économique du pays. Avec 3.269 cas de covid-19 officiellement détectés à ce jour, le Tchad est l’un des pays les moins touchés d’Afrique centrale par la pandémie, mais la dépendance de son économie au secteur pétrolier en a exacerbé les effets. Le programme à moyen terme des autorités tchadiennes comprend notamment un ensemble de réformes destinées à augmenter les recettes non pétrolières, à consacrer des ressources suffisantes aux secteurs sociaux et à l’investissement public, à renforcer le secteur bancaire, à promouvoir l’accès à une énergie plus abordable et verte, ainsi qu’à améliorer la gouvernance, la transparence en matière de dette et le climat des affaires. Recueillis par R.Edmond L’article Flash-Eco est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Flash-Eco a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Filoha Rajoelina tany Nosy Be: “Mety hisokatra amin’ny oktobra ny sehatry ny fizahantany”
Famahana olana ny toekarena sy ny fihariana. Nampanantena ny filoha Rajoelina raha namory ireo mpandraharaha tao Nosy be, omaly fa hojerena ny hanaingana indray ny tontolon’ny fizahantany. Nanapa-kevitra ny filoha Rajoelina Andry fa mety ny hanokafana ny fizahantany amin’ny fiando­han’ny volana oktobra izao saingy miankina amin’ny covid 19 izany. Noraisiny izany fanapahan-kevitra izany, taorian’ny fangatahan’ireo mpandraharaha eo amin’ny fizahantany hanokafana na amin’ny ampahany fotsiny ny asa fiveloman’izy ireo aza. «Anisan’ny fepetra hampiharina amin’izany ny tokony hanaovana fitiliana ireo rehetra hiditra an’i Nosy Be any am-piaingana na eo am-pidirana. Tsapanay ny fitarainanareo. Azo eritreretina tsara ny hanokafana ny seha-pihariana. Vonona izahay ny hirosoana amin’izany», hoy izy. Nampa­nantenain’ny filoha ny hampihenana hatramin’ny 50% -n’ny fandaniana ara-bolan’ireo mpisehatry ny fizahantany amin’ny sehatry ny angovo ka hametrahana ivontoeram-pamokarana angovo azo havaozina azo avy amin’ny masoandro mandavantaona, ao Nosy -Be.Mpizahatany hatramin’ny iray hetsyNiantso ny mpandraharaha hampiasa vola, indrindra amin’ny fananganana fotodrafitrasa ilaina amin’io sehatra io ny filoha. « Ilaina amin’ny fifaninanana hisintonana mpizahantany ny fotodrafitrasa mifanaraka amin’ny filan’ny mpanjifa. Tanjona ny hisintonana mpizahatany hatrany amin’ny iray hetsy 80.000 eo izany izao. Ampitomboina ny toerana handraisana ny vahiny sy ny sehatrasa mifanaraka amin’izany », hoy ny filoha. Natsidiny fa efa nisy fifampiresahana amin’ny kaompaniam-pitaterana ana habakabaka Emirates hahafahana manatanteraka ny tetikasa hanokafana sidina mampitohy an’i Dubai- Nosy-Be. Nandroso va­haolana ho an’ireo tsy mai­n­tsy mindram-bola eny amin’ireo mpampindram-bola madinika ny filoha ny hanalefahana ny tahan-jana-bola ao anatin’ny 12 volana. Natokana ho an’ireo mpiasa efa ara-dalàna eny amin’ny CNaPS anefa izany fepetra izany. Tsiahivina fa niatrika ny fihaonana ireo mpandraharaha vahiny sy teratany amin’ny sehatry ny fizahantany araka ny sokajiny avy.Synèse R.L’article Filoha Rajoelina tany Nosy Be: “Mety hisokatra amin’ny oktobra ny sehatry ny fizahantany” a été récupéré chez Newsmada.